အဆိုပါ Planet ကို Fixer Digest မဂ္ဂဇင်း
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Planet ကိုကမ္ဘာမြေ, fix အနာရောဂါကိုငြိမ်းစေခြင်းနှင့်တိုးတက်စေရန်အမှန်တကယ်ယခုဖြေရှင်းချက်စုဆောင်း
Eco Friendly ပြည်သူ့စာကြည့်တိုက်
သင်ဒီမှာပါ: Home / ကနေဒါများအတွက်မော်ကွန်း
Powered နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး Solid State Lighting စနစ် - အလင်း Up ကိုကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့
18 / 05 / 2015 By ရော်ဂျာ PilonaComment ချန်ထား
ကနေဒါ - ခန့်မှန်းခြေ 1.3 ဘီလီယံကိုလူတွေလျှပ်စစ်ဓာတ်အားလက်လှမ်းမရှိကြပါဘူး။ ဒီရိုးရှင်းတဲ့ 25 ဝပ်ပြားအလင်းအိမ် powering နှင့်ဆဲလ်ဖုန်းအားသွင်းနေကြသည်။
Filed under: အလင်းရောင် Solutions အတူ Tagged: ကေနဒါ, အယ်လ်အီးဒီ
Fog မှစ. ရေ Extract - လျှပ်စစ်မီးမထည့်
17 / 04 / 2015 By ရော်ဂျာ Pilon3မှတ်ချက်
ကနေဒါ - ရေကသဘာဝလေထုသတင်းရင်းမြစ်၏အကောင်းဆုံးအသုံးပြုမှုကိုအောင်ဆန်းသစ်မြူစုဆောင်းအဖြစ်ထိရောက်သောမိုးရေချိန်စုဆောင်းအသုံးချပြီး။
Filed under: Extracting အတူ Tagged: ကေနဒါ
ကမ္ဘာ့ Solutions နို့တိုက်ကျွေးမှု
စားနပ်ရိက္ခာထုတ်လုပ်မှုကို - ဘယ်မှာကျနော်တို့ဦးတည်နေသနည်း
21 / 04 / 2015 By ရော်ဂျာ PilonaComment ချန်ထား
အဘယ်မှာရှိကျွန်တော်တို့ဟာအစားအစာထုတ်လုပ်မှု၏စည်းကမ်းချက်များ၌တည်နေကြသနည်း ဒါဟာဆလိုက်ရှိုးထုပ်ပိုးပေမယ့်ငါကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိအစားအစာထုတ်လုပ်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကောင်းဆုံးစာရင်းဇယားနှင့်အတူလူမှုအဖွဲ့ကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့! ထှနျး! အံ့သြစရာ!
အဆိုပါညံ့ဖျင်းသည် Hydroponics - အဘယ်သူမျှမလျှပ်စစ်မီး & ဘယ်သူမျှမကညှစ်ထုတ်လိုက်
အပင်ပေါက်ရန်အတွက်ဘရောင်းဆန်ကမ္ဘာ့ Feed ရနိုင်မလား?
စည် - သောက်သုံးရေသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဝေးနောက်ထပ်တစ်ဦးမေးအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ပိုလွယ်လာ!
အလွန်သေးငယ်သောအိမ်များ - ဒါဟာရုံတစ်လမ်းကြောင်းသစ် Is ဒါမှမဟုတ်သူတို့ကဒီနေရာမှာနေပါမှဖြစ်ပါသလား
ကမ္ဘာ့ Feed စေရန်မည်သို့: ORGANIZATION သို့မဟုတ် GMO?
ကင်ညာခုနှစ်တွင်ရရှိနိုင်သောအောင်မြင်သောအိမ်သာ franchise! စိတ်ဝင်စားခဲ့သည်?
တစ်ဦးက Bottle သခုနှစ်တွင်အလင်းကို - တစ်ဦးကအိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန် Bottle သထိုကဲဒါဆိုရင်တော့ခုနှစ်တွင်ရေ Add!
ကြွက်ထိန်းချုပ်ရေးပြည်သူ့အင်အား - သင်၏ဇီးကွက် Kestrel ကင်းလှည့်ငှါး
သင့်ရဲ့မြေရေရန်လိုအပ်ပါတယ် - Walk ရန်အဘယ်သူမျှမလိုအပ်နေသောူပည်သူရုံသင့် Pump Call!
Big သင်္ဘောဆီတွေအများကြီး Save နိုင်သလား - ရုံတစ်ခုမှာ Monster ရွက် Add
Category ေရြးပါ ဟင်းချက် Solutions (1) မီးဖို (1) အအေး Solutions (1) ပိုးမွှားလျော့ကျစေ Solutions (1) သဲကန္တာရ Solutions (1) တိုက်စားမှု Solutions (2) နို့တိုက်ကျွေးမှုကမ္ဘာ့ Solutions (1) Fertilizing Solutions (2) ဓာတုပစ္စည်းများ (1) Organization (1) ကြီးထွားလာ Solutions (8) (4) တိုးတက်ကြီးပွားစေရန်ဘယ်လို Aquaponics (1) ဖန်လုံအိမ်အာနိသင် (1) Hydroponics (1) Organization (1) အဘယ်အရာကို (5) တိုးတက်ကြီးပွားစေရန် အစေ့ (1) ဆန် (1) အခြားသူများက (1) ရှားစောင်းပင် (1) ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ (3) ကညွတ် (1) ဆလတ် (1) အာလူး (1) ခရမ်းချဉ်သီး (1) အိမ်ရာ Solutions (1) အလင်းရောင် Solutions (2) Solutions ထိန်းချုပ်ခြင်းပိုးမွှား (1) Propulsion Solutions (1) recycling Solutions (2) ဘက်ထရီ (1) တာယာ (1) သန့်ရှင်းရေး Solutions (1) Uncategorized (1) ဗွီဒီယိုများ (1) ရေ Solutions (3) (1) တင်ဆောင်လာသော (1) Extracting ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန (1) အဆိုပါအယ်ဒီတာ (2) မှစ. စကားလုံးများ အယ်ဒီတာ့အာဘော် (2)
ဘလော့ခ် Tags -
ဆယ်လူလာ | composting အိမ်သာ | ပေါ်ပင် gullies | အစားအစာ producton | ဂါဘမြို့သားဆန် | GBR | germinated အညိုရောင်ဆန် | မြက် | kestrel | အယ်လ်အီးဒီ | monsanto | နဂါးရွက် | မြည် | PDF ဖိုင်ရယူရန် | အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ပုလင်း | အများပြည်သူအိမ်သာ | ပန့်များ | ကြွက် | သင်္ဘောတွန်းအား | စာရင်းအင်း | အလွန်သေးငယ်သောအိမ်များ | သစ်ပင်များ
COUNTRIES မှ Tags -
ၾသစေတးလ် | ဘိုလီးဗီးယား | Burkina Faso | ကေနဒါ | ပြင်သစ် | ဂျာမနီ | အိႏၵိယ | ဣသရလေ | ဂျပန် | ကင်ညာ | မေလးရွား | နိုင်ဂျီးရီးယား | ဖိလစ္ပုိင္ | စင္ကာပူႏုိင္ငံ | တောင်အာဖရိက | အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု | ဗီယက်နမ်
GEO Tags -
မီလီမီတာမီတာ = မီတာကိုပင်လယ်ထဲအထက်မိုဃ်းကိုရွာစေ၏ = မီလီမီတာ,
15 ° | 25 ° | 400 မီလီမီတာ | 800 မီလီမီတာ | 1200 မီတာ | 1500 မီတာ
ဒီနည်းကို SITE ကိုကမကထပြုလာ
မူပိုင်ခွင့်© 2019 - အဆိုပါ Planet ကို Fixer Digest မဂ္ဂဇင်း · န်ဆောင်မှုများ၏စည်းမျဉ်းများ · ကိုယ္ေရးအခ်က္ လံုျခံဳမွု ေပၚလစီ · ထိတှေ့
ကျွန်ုပ်အခြေနေ View လော့ဂ်အင်
[ပေါ့ပ်အပ် link ကိုများအတွက် Placeholder အကြောင်းအရာ] WordPress ကိုဒေါင်းလုပ်မန်နေဂျာ - အကောင်းဆုံးဒေါင်းလုပ်စီမံခန့်ခွဲမှု Plugin ကို